Igumbi le-Chamula - I-Airbnb
Igumbi elithokomele elinombhede ophindwe kabili, igumbi lokugezela eligcwele, ikhabethe, isihlalo sokuzivikela, i-inthanethi ye-WIFI, i-SmartTV. Iphinde ibe ne-Washer Dryer. Futhi inomnyango wayo wokungena kanye nokufinyelela ezindaweni ezivamile zendawo
Ungafunda noma udle ukudla kwasekuseni Ezingadini nge-Wi-Fi ngenkathi ulalele ukububula komthombo nokucula kwezinyoni. Ungafunda futhi ukupheka izitsha zaseMexico ngezimpelasonto, uma unentshisekelo, usibhalele esicelweni sakho sokulungiselela ikilasi, izindleko zincike esitsheni ofuna ukusifunda, kungaba imvukuzane, i-pozole, noma izitsha ngokuya nge isizini.
Sitholakala eBarrio de Guadalupe, enye yendabuko kakhulu edolobheni, amabhlogo amathathu ukusuka eSontweni laseGuadalupe eReal de Guadalupe, namabhulokhi angu-7 ukusuka esigcawini esikhulu sedolobha, ungajabulela ukuhamba kwakho ukuya enkabeni, njengoba Calle Real de Guadalupe lizungezwe izitolo, zokudla nezindawo zokudla enobungane.
IKHITHI YOKWAMUKELA: Uzoba nezinto eziyisisekelo lapho ufika. 2 Amaphepha Ezindlu zangasese, ishampoo e-1, insipho, insipho yezitsha, ujeke wamanzi ongu-1, izithelo, ikhofi, itiye noshukela. Uma isiqediwe, ungathenga okudingayo ezitolo ezinkulu ezifana ne-Chedraui, i-Aurrera noma i-Sams, noma ezitolo ezincane eduze nendawo. Ungacela amanzi kubasebenzi, yi- $ 25.00 pesos ngebhodlela lamalitha ayi-19. INKONZO YOKUHLANZA: Sizongena ukuze sihlanze indlu yakho futhi sishintshe amashidi namathawula kanye ngesonto. Uma udinga izinsuku ezengeziwe evikini, zingu-$150 ngosuku ngokwengeziwe, zicele ngaphambi kosuku ukuze uzihlele.
IKHITHI YOKWAMUKELA: Uzoba nezinto eziyisisekelo lapho ufika. 2 Amaphepha Ezindlu zangasese, ishampoo e-1, insipho, insipho yezitsha, ujeke wamanzi ongu-1, izithelo, ikhofi, itiye…